८० वर्षसम्म यतीलाई पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा सित्तैमा ! «
८० वर्षसम्म यतीलाई पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा सित्तैमा !
Published : 28 January, 2020 1:08 pm
विराटनगर नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले केबलकार सञ्चालन गर्न पाथीभरा देवी दर्शन प्रालि दर्ता गरेका थिए । पाथीभराको तल्लो फेदीमा उनको ९५ रोपनी जग्गा छ, जहाँ केबलकारको ‘बेस स्टेसन’ प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसभन्दा माथि ३१७ रोपनी जग्गा केबलकारका लागि प्रयोग हुन्छ । उनको राजनीतिक हैसियतले मात्र यो जग्गा प्राप्त हुन सकेन । यति धेरै जग्गा प्राप्त गर्न यती समूह नै अगाडि आउनुपर्‍यो ।
‘बेस स्टेसन’ बनाउन उनको जग्गा प्रयोग हुने हुनाले ध्रुवनारायणलाई पनि यती समूहले साझेदार बनाएको छ । सरकारको ३१७ रोपनी जग्गा भने यती समूहले सित्तैमा लिएको छ । ‘केबलकार स्टेसन बस्ने पाथीभराको तल्लो फेदीमा मेरो जग्गा प्रयोग हुन्छ । तर, पोलहरू र माथिल्लो स्टेसन सरकारी जग्गामा बन्छन् । मैले एक्लै सञ्चालन गर्न सकिनँ, त्यसैले यती समूह स्वतः साझेदार भएको छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।